Rugby Analamanga : «hamaha ny olana ny antony hirotsahako», hoy i Norbert Favori | NewsMada
Rugby Analamanga : «hamaha ny olana ny antony hirotsahako», hoy i Norbert Favori
Par Taratra sur 10/01/2018
Vonona hifaninana amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny rugby Analamanga, Razafimbelo Norbert (Favori). Nambarany fa hamaha ny olana iainan’ity taranja lavalava eto an-dRenivohitr’i Madagasikara ity ny tenany.
Anisan’ireo kandidà voalohany nitonona ary tonga nametraka ny antontan-taratasy amin’ny filatsahany hofidina ho filohan’ny ligin’ny rugby Analamanga Razafimbelo Norbert. «Tsy afaka ny hitazam-potsiny ny olana misy eo amin’ny rugby indrindra fa mahakasika an’Analamanga, ny tenako ka handray andraikitra. Izany ny antony ary nahatonga ahy hirotsaka hofidina ho filohan’ny ligin’Analamanga», hoy izy.
Tsy olona vaovao amin’ny tontolon’ny baolina lavalava ny tenany fa mahafantatra tsara ity taranjan’Ambalambahoaka ity. Raha tsiahivina, efa mpilalao izy, ary mpitantana ny fileovana Afa Ankazomanga. Ankoatra izany, efa nitondra ny rugby voalohany tany Toamasina izy. Nanangana ireo klioba tany an-toerana izy tamin’izany ka anisan’ireny ny Rugby Club Port sy ny XV Requins. Efa nanazatra ny ekipan’ny Oniversiten’i Toamasina (Cur), ihany koa izy.
Ankoatra izay, efa nitantana ny ligin’Antsinanana ihany koa Ra-Norbert.
Nomarihiny fa anisan’ny taranja ankafiziny sy ankamamiany ny rugby. Izy rahateo taranaka mpilalao rugby satria ny raiamandreniny sy ireo razambeny tany aloha tany, niaina tao anatin’izany avokoa. «Tsy momba ny atsy na ny aroa aho fa hipetraka ho kandidan’ny firahalahiana. Ny hamerina ny laza tsaran’ity taranja, anisan’ny mampalaza ny Malagasy, ity, no tanjoko», hoy hatrany Ra-Norbert.
Ankoatra ny fanatanjahantena, anisan’ny ahalalana an-dRa-Norbert ihany koa ny eo amin’ny lafiny sosialy sy ny sehatra politika. Rahalahin-dRamanantsoa Rabenjamina, minisitra misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany, izy ary filohan’ny fikambanana Favori. Olona akaiky ireo vahoakan’ambanitanàna sy ambalambahoaka izy ary be traikefa amin’ny fifandraisana eo amin’ireo mpitondra fanjakana.
Heverin’ny rehetra, manomboka any amin’ny fitondrana ka hatraty amin’ireo seksiona mpifidy sy ny fileovana, fa Ra-Norbert no hamaha izao olana sy disadisa misy eo amin’ny rugby eto Analamanga, izao.